कमरेड ! मदन भण्डारीलाई चिठी
नेपाली पब्लिक सोमबार, जेठ ३, २०७८
हामी तपाईंका सपना साकार पार्न अहोरात्र लागिपरेका छौं । तपाईंको हत्यापछि विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईंको रिक्त संसद् सदस्य पदमा चुनावमा उठायौँ । हामीले हत्याको बदला लिन भनेर चर्काएको आन्दोलनको राप र सेतो पहिरनका कारण चुनाव जित्यौं ।
सायद, यसै पृष्ठभूमिमा भएको उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा संसदमा उपस्थित भयौं । ९ महिना सरकारमा जाने अवसर मिल्यो । तपाईंका ताजा वाणीका प्रभावले सायद इतिहासमा उल्लेख्य काम गर्‍यौं । सत्ताको मिठो स्वाद पनि त्यही बेला थाहा पाइहाल्यौँ । त्यही स्वादका कारण अब जसरी पनि सत्तामा सामेल हुनुपर्छ भन्ने कुबुद्धि पलायो । फलस्वरुप पूर्वपञ्चहरू जसका विरूद्ध हिजो संघर्ष गरेका थियौं, उनीहरूको काख प्रिय भयो ।
तपाईंको आशय अर्कै थियो होला बितिहाल्नुभयो। अहिले हामीलाई सजिलो भाछ। मेची महाकालीदेखि हिमाल, पहाड, तराईका सबैले केपी ओलीदेखि प्रचण्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनिदिएका छौं ।
निरन्तर यो वा त्यो बहानामा सत्ता वा सत्ताको वरिपरि रहिरह्यौँ । सत्ता परिवर्तनका लागि भन्दै ‘माओवादी’ नाम राखेर केही साथीले जनताकै मायाले जनताकै लागि जस्तो गरी उत्पीडित र उपेक्षितको पक्षमा उथलपुथल ल्याउने गरी सशस्त्र विद्राेह गरे । त्यस बेलाका हाम्रा कमी कमजोरीका कारण पनि उक्त संघर्ष भुसको आगो जसरी फैलियो । लाख कोसिस गर्दा पनि हामीले हराउन सकेनौँ, उनीहरूले जित्न पनि सकेनन् ।
राजाबाट अनेकौं कोसिस भयो, जोर चलेन । त्यस्तै अवस्था विद्यमान रहे हामीले पटक पटक सिलाएका दौरासुरूवाल फाटेर जाने तर सत्ताको स्वाद मृगतृष्णा हुने ठानेर माओवादीसँग सल्लाह मिलायौं । फलस्वरूप राजालाई बिदा गर्‍यौं । जनतासँग आइन्दा हिजोका गल्ती नदोहोर्‍यने वाचा गर्‍यौं । बिचरा गरिबी र उत्पीडनमा परेका जनताले पत्याए, साथ दिए । साथीहरूले दौरासुरूवाल सिलाउन सुरु गरे। अलि बढी उत्पीडितलाई भ्रममा पार्न र बाँकी आफूअनुकूलको अपूर्ण विधान बनायौं । बिस्तारै जनता सेलाएको थाहा पाएपछि विधानलाई पूर्णता दियौं ।
किसानलाई मल दिन नसके पनि, वीर अस्पतालमा शव राख्ने फ्रिज किन्न नसके पनि, राष्ट्रपतिज्यूलाई हेलिकोप्टरदेखि कार्पेट गलैँचासम्म समयमै व्यवस्थापन गरेका छौं ।
सधैँका लागि सिलाइएका केही सेट दौरासुरूवालको स्वाद लिन नपाउँदै ८–१० महिनामा कुर्सी हेरफेर हुने कुराले तनाव भयो । हल्ला नगरी सल्लाह गर्‍या र दुई चुलोलाई एउटै बनाएको अकस्मात् घोषणा गर्‍यौं । यो सब देश र जनताका लागि गरिएको भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न खोज्यौँ। जनतालाई पत्याउन कर लाग्यो। अलिअलि नपत्याउनेलाई लेनिनवादी संगठन सञ्चालन पद्धति सम्झायौँ । त्यसो गर्दा पनि नमान्नेलाई थप अनुशासनका कुरा सम्झायौँ । हाल आफैंले बनाएको विधानबमोजिम ५ वर्षलाई आरामदायी कुर्सीमा विराजमान छौं ।
कतिबेला भात भान्सामा अलिकति तलमाथि हुँदा बबन्डर मच्चिन्छ । जनतालाई जनताकै लागि विधि पद्धतिको कुराले हल्ला भएको भनिदिन्छौँ । कमरेड, तपाईंको हत्याको छानबिन गर्न फुर्सद निकाल्न सकेका छैनौं । यो राजकाजको कुरै जटिल । फुर्सद कहाँ हुन्छ र ? फेरि हत्याको छानबिन गर्दा भगवान् रिसाउने हुन् कि भन्ने डर पनि यत्तिकै छ।
तपाईंको सपना साकार पार्न दिगम्बर झा, कैलाश खड्का, सुशील भट्ट, उपेन्द्र कोइराला जस्ता पार्टीका होनहार योद्धाहरु मनोनयन गरेका छौं । विद्यानन्द माझी, गोपाल पराजुली, नवीन घिमिरेलाई विभूषित गरेका छौं। यति र ओम्नी जस्ता समूहसँग गहिरो सम्बन्ध राखेका छौं। बालुवाटार मिलाएर छोपछाप पारेका छौं । एनसेल, वाइडबडी, न्यारोबडी, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण आफ्नै भएकाले उन्मुक्ति दिएका छौं। होली वाइन लागेर झन्डै बर्बाद पारेको थियो, हतार हतार अमिलो खाएर लामो सास तानेर बसेका छौं ।
हामी तपाईंहरूकै त हौं नि भनिदिएका छौं । क्षेत्री, जनजाति, मधेसी, दलितको अनुहार हामीमा नै हेर भनेका छौं । सबै खाले भाषा धेरथोर हामी नै जान्दछौँ । भाषिक प्रतिनिधित्वका कुरा छाड्नुस् भनेका छौं।
एमसिसीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने भएका छौं । परिवर्तनपछि समावेशी र समानुपातिकका कुराले बढी अलमल्यायो। लिंग, भेग र भूगोलका कुराले पनि सतायो । दलित उत्पीडितलाई मानका खातिर सदस्यमा थन्क्यायौँ। आधा हिस्सा महिला भनेर उपाध्यक्ष माया मार्‍यौं । त्यो पनि हामी नै छानिदिन्छौ भनेका छौं। जनजातिलाई अलि अलि दियौँ। बाँकी हामीलाई हेरेर चित्त बुझाउm भनिदियौँ। नत्र राष्ट्रपति कसरी बाँड्नू, प्रधानमन्त्री कसरी बाँड्नू ? त्यसैगरी अन्यत्र पनि पदहरू कसरी बाँड्नू । देशको १,२,३, ४, ५औँ ओहदाको अनुहार हेरेर चित्त बुझाऊ भनेका छौं । सत्तारूढ दलको सचिवालयमा ९ जना छौं । हैसियत भएका तर आँखामा नपरेर महिला परेनन् । फेरि राष्ट्र प्रमुख नै महिला भएपछि भइहाल्यो नि भनेका छौं ।
७ जना बाहुन भएर के भो त ? हामी तपाईंहरूकै त हौं नि भनिदिएका छौं । क्षेत्री, जनजाति, मधेसी, दलितको अनुहार हामीमा नै हेर भनेका छौं । सबै खाले भाषा धेरथोर हामी नै जान्दछौँ । भाषिक प्रतिनिधित्वका कुरा छाड्नुस् भनेका छौं। राजनीतिक वैचारिक काम हाललाई थाती राखेका छौं । हामीले हिँड्ने ,बोल्ने र कुम मर्काउनुलाई राजनीतिक काम भनेका छौं । राज्यले पिँधमा पारेका जनता उठाउन पढाइएका पाठले अहिले समस्या निम्त्याएको छ। हिजो पढाएको पाठले समस्या बनाएपछि झन् अब के पढाउनु र ? झन् १० वर्ष संगठित रूपमा पढाएका पाठले हामी नै असुरक्षित भएका छाैं । जनताले हाम्रो भरोसा गर्न क्रमशः छोडेका छन् । त्यसैले हामी पनि जनताको भरोसा त्यति गर्दैनौं । र, त चरी, बाहुन आदि खोज्यौं। यति, ओम्नी, गोकर्णसँग सल्लाह गर्‍यौं । शारदा प्रसाद, दुर्गा प्रसाई आदिलाई एजेन्ट तोक्यौँ। भाइ नातेदारलाई ठाउँठाउँ खटायौँ । प्राडो, पजेरो, सांसद पेन्सनबाट पहिल्यै सुरु गरेका थियौं । धेरै विरोध भएर स्थगन गरेका थियौं । अहिले अरू तरिकाबाट मिलाउँदै छौं । पार्टीका पुराना मोडेल अनुशासनका कुरा, तीन आठका नियम, लेनिनवादी संगठन, जनपक्षीय संस्कृति र सादा जीवन उच्च विचारका कुरा गर्दैनौं ।
१० वर्ष संगठित रूपमा पढाएका पाठले हामी नै असुरक्षित भएका छाैं । जनताले हाम्रो भरोसा गर्न क्रमशः छोडेका छन् । त्यसैले हामी पनि जनताको भरोसा त्यति गर्दैनौं
कमरेड ! पहिले पढेको पाठ घाँडो भएको छ, थप पढाएर के गर्नु ? आखिर हाम्रो उमेर उत्तरार्द्धतिर लागिहाल्यो। मरेपछि जे सुकै होस् । अँ, ६ सालदेखि रटान लगाएको भूमिसुधारका कुरा सुकुमबासीलाई घडेरी दिने आयोग बनाएर थामथुम पारेका छौं । किसानलाई मल दिन नसके पनि, वीर अस्पतालमा शव राख्ने फ्रिज किन्न नसके पनि, राष्ट्रपतिज्यूलाई हेलिकोप्टरदेखि कार्पेट गलैँचासम्म समयमै व्यवस्थापन गरेका छौं । जनताको मतलब कसलाई ? राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त घोलमाल गरेर राम्रो गरिदिनुभएछ कमरेड। तपाईंको आशय अर्कै थियो होला बितिहाल्नुभयो। अहिले हामीलाई सजिलो भाछ। मेची महाकालीदेखि हिमाल, पहाड, तराईका सबैले केपी ओलीदेखि प्रचण्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनिदिएका छौं ।
तर कमरेड, यसरी धेरै समय देलान् जस्तो छैन । जनताको चेतनाको गति तीव्र भएकाले गाह्रो पर्ला जस्तो छ । हिजो पो एउटा चिठी पुग्न वर्ष दिन लाग्थ्यो । एउटा सूचना पुर्‍याउन आकाशमार्ग प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। सत्तातिर आँखा लाउनेलाई यो तेरो बाटो होइन भन्दा पत्याउँथ्यो । अहिले त पाखेहरू मुख मुखै लाग्छन् । को कोसँग संवाद गर्‍यो, सुनेर बस्छन् । ७० करोडले कम्ता गाह्रो पारेको छैन । र पनि ढुक्क हुनू, तपाईंका सपना पूरा गर्न लालायित छौं र कोसिस गरिरहेका छौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८ १०:५६